နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ > 1 နာရီမီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဘေးကင်းပါသည်။
2 Key Lock-weierxin လုံခြုံစက်ရုံပါသော 1 နာရီမီးသတ်သေတ္တာ
အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေး 120 MIN FORPROOF သည်လက်စွဲနှင့်အတူ Safe&ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်
အရည်အသွေးစျေးပေါသောစျေးနှုန်းအထောက်အထားအထောက်အထားအထောက်အထားလုံခြုံရေးအပ်ငွေသေတ္တာစက်ရုံ - Foshan Weierxin ထုတ်လုပ်သူ | weierxin လုံခြုံ
* မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - မိနစ် 30 ။
* Lock: Digital + Key Lock / Fingerprint + Key Lock ။
* အစိုင်အခဲသံမဏိ Bolt, အချင်း 24 မီလီမီတာ။
* အပွင့် 90 ဒီဂရီပွင့်လင်းနှင့်အတူချောမွေ့တံခါးပိတ်။
QG-33 မှလွဲ. ထိပ်ဆုံးတွင်သေးငယ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့& QG-43 ။
* အမြင့်သည် 520 မီလီမီတာကျော်ရှိသောအခါဘီး4ဘီးများရှိသည်။ ဘီးသည် 70 မီလီမီတာမြင့်မားသည်။
* နောက်ကျောဘက်မှာ2mounting တွင်း။
ပုံစံ ပြင်ပအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) internal အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) စက္ဏူထူအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) နေရာချထားခြင်း N.W (ကီလိုဂရမ်) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (m³)
ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောင ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောင ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောင စင် အံဆွဲ
QG-33 330 385 310 280 345 210 370 425 350 10င် 31 0.06
QG-43 430 385 310 380 345 210 470 425 350 10င် 40 0,07
QG-52 520 385 360 330 345 260 530 405 390 1 1 50 0,08
QG-60 600 420 370 410 380 270 610 440 400 1 1 60 0,11
QG-70 700 440 390 510 400 290 710 460 420 1 1 72 0,14
QG-80 800 460 410 610 420 310 810 480 440 1 1 88 0,17
QG-1000 1000 540 470 810 500 370 1010 560 50021 125 ၌ 0.28
QG-1200 1200 540 470 1010 500 370 1,210 560 50021 133 0,34
QG-1500 1500 620 530 1,310 580 430 ထားသော 1,510 640 560 သုံး 1 210 0,54
1. ဒီ Safe fireproof ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူအရောင်းရဆုံးပါပဲ။ ၎င်း၏မီး rating 30mins QG-43 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအီး, ROHS နှင့် ENC (2101 က ISO 1182) လွန်ပြီ။
ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို 2. ?
ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့3လမ်းရှိပါတယ်။
လမ်း 1: ဘက်ထရီအပြည့်အဝအာဏာကိုဖြစ်တဲ့အခါ, သင်မှန်ကန်တဲ့ password ကိုနှင့်အတူဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
လမ်း 2: ဘက်ထရီအချည်းနှီးသောအခါ, သင်ကဖွင့်ရန်ပြင်ပဘက်ထရီကိုသုံးနိုင်သည်။
လမ်း 3: သင်စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့တဲ့အခါ, သငျသညျအရေးပေါ်သော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
3. တဦးတည်းချိန်ညှိကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအတွင်း၌ရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအဆိုအရ၎င်း၏အနေအထားကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးနဲ့ LED အလင်းလည်းမရှိ။ သငျသညျ password ကိုအတူ Safe ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ, ပေါ်မှာလှည့်ပါလိမ့်မယ်။
5. Insert 4x AA ကိုဘက်ထရီ။
6. ခိုင်ခံ့သောအစိုင်အခဲသံမဏိတုံး။ အဆိုပါအချင်း 24mm ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ကျောဘက်ခြမ်းမှာ 7.2mounting ပေါက်တွေ။ သငျသညျမွို့ရိုးကိုဖို့ Safe fix နိုင်ပါတယ်။
QG-33 လက်ဗွေသော့ခတ်အတူ။ အဘယ်သူမျှမသေးငယ်တဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွင်းပိုင်း။ တံခါးကိုအပေါ်အဘယ်သူမျှမလက်ကိုင်။ တစ်ဦးတည်းသာကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအတွင်း၌။
QG-60 လက်ဗွေသော့ခတ်အတူ။ ထိပ်မှာတစျခုမှာအသေးကက်ဘိနက်, တကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအတွင်း၌။
QG-70 ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်အတူ။ ထိပ်မှာတစျခုမှာအသေးကက်ဘိနက်, တကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအတွင်း၌။
တစ်နာရီမီးသတ်အမှတ်စဉ်2သော့ခတ်သော့ခတ်ပါ။
* မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - 120 မိနစ်* Lock: လက်စွဲစာအုပ် / ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ် + ကီးသော့ခတ်* Handel:3ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ* အစိုင်အခဲသံမဏိသော့ခမ်း, အချင်း 30 မီလီမီတာ,* 180 ဒီဂရီပွင့်လင်းနှင့်အတူချောမွေ့သောတံခါးကိုစစ်ဆင်ရေး;* လေးလံသောတိုင်သံမဏိပတ္တာ;* အတွင်းပိုင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း;အောက်ခြေရှိ Boade သေးသေးလေး,
* အရွယ်အစား: H600 * w420 * d370mm* အထူ - ခန္ဓာကိုယ် - 20mm, တံခါး - 12mm* n.w ။ : 60 ကီလိုဂရမ်* အတွင်းပိုင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း* အတွင်းပိုင်းအလင်း LED* နောက်ကျောဘက်မှာ2mounting တွင်း